रञ्जु दर्शनाः काठमाडौं महानगरमा कांग्रेस हराउने एमालेकी ‘एक्स’ उम्मेदवार – Sanghiya Online
रञ्जु दर्शनाः काठमाडौं महानगरमा कांग्रेस हराउने एमालेकी ‘एक्स’ उम्मेदवार
Posted on : May 22, 2017 - No Comment
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै एकाएक चर्चामा आएकी युवती हुन रञ्जु दर्शना । देशकै महत्वपूर्ण र ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा लड्ने २१ वर्षीय रञ्जुको हिम्मतको तारिफ नगर्ने सायदै होलान् । विवेकशील नेपाली दलबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव लडेकी दर्शनाले तेस्रो स्थानमा रहँदै सम्मानजनक मत पनि ल्याएकी छन्।
आजसम्मको मतगणनामा उनले १० हजार मत कटाएकी छन् । यो उनका लागि ठूलो सफलता नै हो ।अब कुरा गरौं विवेकशील दलकोव्यक्तिगत रुपमा रञ्जु दर्शना आँट रहिम्मत भएकी महिला हुन् । र, उनले नेतृत्व पनि गर्न सक्छिन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । तर, पार्टीको कुरा गर्ने हो भने भुमिका शंकास्पद देखिन्छ । विवेकशील नेपाली दलले उठाएका हरेक एजेण्डा नेकपा एमालेसँग मिल्दोजुल्दो हुने गर्दछ । विवेकशील दलले त्यो मुद्दामा विरोध गर्यो जुनमा एमाले थियो ।
उदाहरणका लागि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण होस् चाँहे डीआईजी नवराज सिलवाल होस् वा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण । यी सबै एमालेले उठाएका मुद्दा हुन् जसमा विवेकशील दल पछाडी पछाडी लागेर हिडेको देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने विवेकशील एमालेको निर्देशनमा चल्नेपार्टी हो ।काठमाडौंको टिचिङ हस्पिटलमा बसेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन बस्ने डा गोविन्द केसी होस वा त्यो कदममा खुलेरै साथ दिने विवेकशील दल अख्तियार प्रमुख लोकमान हटेपछि अस्ताए ।
काठमाडौंमा घण्टौं लोडसेडिङ हुँदा, धुलो धुवाले स्थानीयलाई सास्ती हुँदा यी विषयमा न त गोविन्द केसी अनसन बसे नत विवेकशील नै बोल्यो । लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लाउनुपर्ने भन्दै अनसन बस्ने गोविन्द र सडकमा रमिता देखाउने विवेकशील जनताका प्रत्यक्ष समस्या समाधानलागि न त आवाज उठाए न त कुनै पहल गरे ।
अहिले विवेकशील दलले रञ्जु दर्शनालाई काठमाडौंको मेयरमा उठाएको छ । २१ वर्षकी युवती पपुलर छेभनेर उनलाई अगाडि सारियो । सुत्रहरुका अनुसार उनलाई योग्यताकाआधारमा नभई पब्लिसिटी र कांग्रेस माओवादीको भोट काट्न एमालेकै डिजाइनमा अघि सारिएको रहेछ ।
उनले चुनावमा अहिलेसम्म १० हजार भोट कटाएकी छन् । यदि रञ्जुले पाएको भोट कांग्रेसका थिए र कांग्रेसले पाएको भए महानगरमा कांग्रेस जित्ने सम्भावना बढी रहन्थ्यो । तर, रञ्जुले ती भोट काटिन् । उस्तै, पनि संगठनमा बलियो एमालेको भोट फिक्स छ । रञ्जुदेखि किशोर थापासम्म जोसुकै उठेपनि तलमाथि हुने सम्भावना छैन् ।
अहिले जति भइरहेको छ त्यो कांग्रेस लगायत अन्य दलको हो ।त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै हेर्ने हो भने विवेकशीलले रञ्जु दर्शनाको प्रचारका लागि प्रमोसन लगायत विधामा अरबौं खर्च गरेको पाइएको छ । एक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा यतिसम्म लगानी गरेको पाइएको हो । जबकी यत्रो प्रचार कांग्रेस माओवादीले गर्न सकेका छैनन् ।
शेरबहादुर, प्रचण्ड भ्रष्टाचारी होलान । १० वर्षदेखि राजनीति गर्दै साँंसद छन् । तर, विवेकशीलले यत्रो प्रचार गर्यो कि त्यति त देउवा प्रचण्डले गरेका छैनन् । रोचक कुरा त के छ भने विवेकशील पार्टी सत्तामा गएको पनि छैन् न त ठूलो संगठन नै छ । अनी कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सुत्रहरुलाई मान्ने हो भने यो पैसा एमालेको आग्रहमा युरोपियन युनियनलेअनुदानमा दिएको हो । यहाँनेर प्रश्नआउन सक्छ कि एमालेले विवेकशीलका लागि किन पैसा मागिदियो ? किनकि एमाले कांग्रेस र माओवादीलाई समाप्त पार्न चाहन्छ । त्यसका लागि उसले बाहिर राष्ट्रवादको ढोल पिटिरहेको छ भने भित्र विवेकशील, साझा पार्टी जस्ता संगठन बनाएको छ, जसले कांग्रेस र माओवादीको भोट काटोस र आफूले चाहेको गर्न सकौं भन्ने एमालेको योजना छ ।
जस्तोकी एमालेले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ ।यदि कांग्रेस र माओवादी समाप्त भयो भने आफूले चाँहेका कुरा पुरा गर्न एमालेलाई सकैले रोक्न सक्दैन् । त्यसकारण यो सबै डिजाइन एमालेकै हो भन्नेमा दुईमत छैन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बोआओ मञ्चमा सहभागी हुन चीनको हैनान प्रान्तको बोआओ प्रस्थान
नवराज सिलवालको ग्रह दशा बिग्रियो, सिलवालविरुद्ध उजुरी दर्ता, उम्मेद्वारी रद्ध हुने संकेत
युवा संघका उपाध्यक्ष राजु गुरुङलाई जिल्ला पार्टीबाट कारबाही
उपेन्द्र यादवको फराकिलो दुर्दर्शी सोच, फैलाए सहयोगको हातः दोस्रो निर्वाचनमा मधेसमा साझा उम्मेदवारको प्रस्ताव
नेकपा एमालेका पूर्व सभाषद् प्रद्युमन चौहान र केन्द्रीय सदस्य प्रहलाद गिरीदवारा पार्टी परित्याग गरि फोरम नेपालमा प्रवेश, मधेसी जनताका जायज माग सम्बोधन गर्न एमाले र ओली नै मुख्य बाधक रहेको निष्कर्ष